नथिरामले घुस खायो « Khabarhub
नथिरामले घुस खायो
नथिराम पक्राउ परे । नथिराम पुनरावेदन अदालतका कर्मचारी हुन् । आज उनी १५ सय रुपियाँ घुससहित रङ्गेहात पक्राउ परेका छन् ।अदालत वरपर ठूलै त्रासदि छ, नथिरामको परिवारपछि सबैभन्दा धेरै चिन्ता त नथिरामले चिया पिउने र पान खाने पसलमा छ ।
उनी उधारोमा चिया पिउँथे, उधारोमै पान खान्थे र हप्ता वा महिनामा एकमुष्ठ पैसो बुझाउँथे । अब कहिले नथिराम फर्कने हुन् ! पानपसले र चियापसलेलाई विस्मात छ ।
नथिरामको घुसकाण्डको लामो फेहरिस्त छ । नथिराम दुई दशकअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सुरुदेखि नै उनी अदालतमा छन् । नथिराम बिहानै फोनिक्स साइकल चढेर कार्यालय पुग्छन् । झगडियाका फाइल यो कोठामा र ऊ कोठामा ओसारपसार गर्छन् । कुनै फाइललाई फाइल अघि वा पछि गरिदिएबापत केही रुपैयाँ लिइदिन्छन् ।
साँझमा हजार र सयका नोटहरू नथिरामले तलदेखि माथिसम्म भाग लगाएर टुङ्गोमा पुर्‍याइदिन्छन् । थोरै रुपैयाँ उनको भागमा पनि पर्छ । अब आफ्नो बयानमा उनले यो सबै फेहरिस्त दिन्छन् कि दिँदैनन्, पछि नै थाहा हुनेछ ।
भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नथिरामलाई प्रहरीले समातेर लैजाँदै गर्दा उनको खल्तीमा साइकलको साँचो थियो । त्यो साँचो पालेलाई दिएका छन् । नथिरामलाई केही दिनदेखि लोदर लागेको थियो, आज पुलिसले समात्यो ।
बिहे गरेर दिएकी छोरी माइत आएकी छिन् । छोरीको ससुरालतर्फ दाइजोमा केही कुरा चित्त बुझेको छैन । छोरी फर्कंदा ट्याक्टरको डालामा पराल ओछ्याएर सनेशहरू पठाउनुपर्ने थियो । नथिराम यस्तै केही कुराको जोहोमा थिए ।
सञ्चय कोष त छोरालाई विदेश पठाउने बेलामै निकालेका हुन् । त्यो पनि कति नै हुन्थ्यो ! छोरो मलेसिया गएर चार महिना बसेर फक्र्यो । चिनेजानेकै मानिसले छोरो उता पठाइदिएका थिए । छोरो त जसोतसो फक्र्यो तर कामको कुरा ढाँटेर पठाइदिनेले पैसा फिर्ता दिएनन् । नथिरामले सञ्चयकोषबाट निकालेको त्यो पैसो माया मारिदिए ।
एकफेर त्यो ठगलाई कारबाही गराउन उजुरबाजुरका लागि प्रहरी कार्यालय पनि गएका हुन् तर प्रहरीले यो र ऊ प्रमाण ल्याऊ भन्यो, उजुरी दर्ता भएन ।
पन्ध्र सय रुपियाँ उसले समातेकै हो । उसको भागमा कति पथ्र्यो र ! पाँच भागको एक भाग जति न हो । भ्रष्टाचार चाहिँ उसको भागमा सिङ्गै परेको छ । अब भारी एक्लै बोक्ला कि, कसकसलाई पोल्ला !
छोरालाई मलेसिया पठाइदिनेका घरमा गत वर्ष दशैँको अष्टमीका दिन केही प्रहरी भोजमा रमाइरहेको देखे । उनले आफ्नो उजुरी दर्ता नहुने मेसो पाए । प्रहरीलाई भोज खुवाउनेका घरअगाडि साइकलको घण्टी बजाउन पनि छाडे बरु आफैँ साइकल तर्काएर जान थाले ।
छोराले कमाउन नसकेपछि नहरपारीको आधा कठ्ठा खेत बेचेर छोरीको बिहे गरेका हुन् । उताकाले दाइजोमा चित्त नबुझाएपछि छोरी माइतै बसेकी छन् ।
आजदेखि अब नथिराम कारागारमा हुनेछन् । उनका हातमा नोटको रङ लागेको छ । रङ पोतिएको नोट लिएर अड्डाबाट मान्छेहरू आए, कसले हो कुन्नि, पोल हालेको रहेछ ।
ती मान्छेले नथिरामलाई आज फाइलको काम गरिदिनु हामी चियाखर्च दिउँला भनेछन् । नथिरामले चियाखर्च लिएकै हुन् । यसबापत ग श्रेणीको सिदा खाने गरी उनी कारागार पु¥याइएका छन् ।
जागिरको आशा भनेको पेन्सनको थियो, बुढेसकालको सहारा । अब त पेन्सन पनि नहुने पक्का भयो ।
केही अनलाइन पत्रिका अनि रेडियोले आज हेडलाइन पाए । नथिरामलाई १५ सय रुपैयाँ बडो भारी भयो । उनको फुसको घर यो हिँउदमा पनि नछाइने भयो, छाइयोस् पनि कसरी ! सञ्चयकोष दलालले खाइदियो, आफू जेल परे ।
नथिराम एकफेर हवाईजहाज चढेका छन् । पाँच वर्षअघि हिँउदमा राजविराजबाट काठमाण्डु गएका हुन् । हवाईजहाज चढ्न साइकल चढेर हवाईअड््डा पुगेका थिए । हवाईअड्डाबाट साइकलमै घर फर्के । पु¥याउन र लिन छोरो आएको थियो ।
आज पनि आफ्नो टाउकोमाथि हवाईजहाज उड्दा नथिरामले उत्सुकताले आकाशतिर हेरे । हवाईजहाज किन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचार नथिरामले पढेका थिए । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भयो तर कसैलाई कारबाही भएन भनेर पत्रिकाले लेखेको थियो ।
नथिरामले फाइल चाँडो अघि बढाइदिन १५ सय रुपैयाँ लिएकै हुन् तर उनले मागेका होइनन् । फाइलवालाहरूले आफैँ दिएका हुन् ।
नथिराम पक्राउ परेको समाचार जिल्लाभरि आगोको लप्कोसरह फैलिएको छ । रेडियोमा फुकिएको छ । अनलाइनहरूमा विशेष समाचार बनेको छ । समाचारको लिङ्क फेसबुकमा अत्यधिक शेयर भएको छ ।
रेडियोमा नथिरामको हेडलाइन समाचारपछि एक जना समाजसेवीले रिबन काटेर पुलको शिलान्यास गरेको समाचार पनि छ । तिनै समाजसेवी रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूलाई सयकडा ३६ का दरले ऋण दिने गरेका छन् ।
नथिरामलाई सञ्चय कोषबाट पैसा निकाल्न लगाएर उसको छोरालाई विदेश पठाएर अलपत्र पार्ने मान्छे समाजसेवीमा दरिएका छन् । उनी आउँदो चुनावमा पार्टीको उम्मेदवार हुने कुरा सुनिएको छ ।
नथिराम तल्लो तहको सरकारी जागिरे हुन् । परिवार पाल्न जेनतेन पुगेकै थियो । फाइल ओसार्न लगाउनेले दिएको पैसाको लोभमा पर्दा आज जेल पुगे ।
नथिराम प्रहरीलाई घरमा बोलाएर भोज गर्न सक्दैनन् । उनी विदेश जानेलाई ऋण दिने समाजसेवी पनि होइनन् । उनले सीडीओ नै चिनेको छैन, मन्त्री चिन्ने कुरै भएन ।
चियापसले र पानपसले मुखामुख गर्दैछन् । आखिर नथिरामले नखाएको भए पनि कसैले त खाइहाल्थ्यो । यहाँ कसले खाँदैन र पैसा ! चियापसलेका पुराना गिलासहरूलाई थाहा छ, चिया खाएर अनि खुवाएर हरेक सरकारी टेबलमा के के बेचिएको छ भन्ने कुरा !
जुन प्रहरीले नथिरामको कठालो समातेर उसलाई भ्यानमा राखेको थियो त्यसैले अस्ति मुसहरी गाउँमा झगडा मिलाइदिन्छु भनेर १० हजार रुपियाँ लिएको थियो । त्यही प्रहरीले उजुर गर्न नजाने गरी मिलाइदियो भन्थे ।
त्यसरी पुलिसले मिलाउन पाइँदैन भनेका पनि केही गाँउलेले तर उनीहरूको केही सिप चलेन । उजुर गर्छु भन्नेलाई नै पो पुलिसले थानामा लगेको थियो । उजुर गर्छु भनेर जिद्दी गर्दा निलडाम परेको छ, अझै निको भएको छैन ।
गाउँमा ती समाजसेवीको विरोध गर्ने हिम्मत कसैको छैन । उनी सबै सरकारी मान्छेका विश्वासका मान्छे हुन् ।
गाउँलेलाई आज नथिरामको दुःखको केही अर्थ छैन । ऊ भ्रष्टाचारीमा दरिएको छ । पन्ध्र सय रुपियाँ उसले समातेकै हो । उसको भागमा कति रुपियाँ पथ्र्यो र ! पाँच भागको एक भाग जति न हो भ्रष्टाचार चाहिँ उसको भागमा सिङ्गै परेको छ ।
नथिरामलाई समात्ने अड्डाका हाकिमहरू मार्केटिङ कम्पनीका मार्केटिङ अफिसरझैँ भएका छन् । नथिराम घुस लिँदालिँदै पक्राउ प¥यो भनेर उसलाई पत्रकारका सामुन्ने उभ्याए । घुस खायो भन्ने हल्ला चलाए ।
भ्रष्टाचार गरेको भनेर नथिरामको नाक काटिएको दिन समाजसेवी पुलको रिबन काटे । यता नथिरामले प्रहरीमा बयान दिँदै गर्दा समाजसेवी पुलमा भाषण दिँदै थिए ।
गाउँलेलाई नथिरामको बयानमा दिलचस्पी छ । नथिरामले के भन्ला, कसकसलाई पोल्ला वा भारी एक्लै बोक्ला भन्ने चासो छ । अड्डाले चाहिँ अब अदालतमा भ्रष्टाचार सधैँका लागि सकिएझैँ प्रचार गरेको छ ।
यसरी नथिरामले घुस खायो ।
प्रकाशित मिति : १२ कार्तिक २०७८, शुक्रबार ९ : १५ बजे